Naqshadeynta naqshadaha qoraaga | Waxaan qoreynaa waraaqahaaga shaqada
, 13: 05
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah dhismaha
Shahaadada dhismaha waxay leedahay astaamo yar oo gaar ah marka la barbar dhigo koorsooyinka kale: Waxay u baahan tahay hal-abuur, male awaal iyo karti ay koox ku wada shaqeeyaan. Sababtoo ah mashaariic badan ayaa looga shaqeyn karaa oo keliya koox - xitaa inta wax la baranayo. Astaamaha kale ee gaarka ah waa darajooyinka suurtagalka ah: Waxaad kala dooran kartaa kan Bachelor iyo Master-ka Fanka iyo Bachelor iyo Master-ka ee Sayniska / Injineernimada. Intaa waxaa dheer, waxaa jira kala duwanaanta koorsadan. Kaliya kuma saabsan aasaaska dhismaha sida:
Dhismo la taaban karo
Waxay kaloo ku saabsan tahay maareynta dhismaha, maareynta dhismaha, qorsheynta dhismaha, sharciga dhismaha. Liiskani wuxuu ku tusayaa kala duwanaanta barashada dhismaha. Laakiin waxaa jira maadooyin kale oo ay tahay in la barto:
Taariikhda dhismaha iyo farshaxanka.
Ka dibna dabcan codsiyada CAD / CAM. Kombiyuutar la'aan, waxba maanta shahaado ma shaqeeyaan. Muhiimadda weyn ee wax ku oolka ah ee shahaadada dhismaha ayaa sidoo kale lagu muujiyey xaqiiqda ah in bilowga shahaadada, koorsada ay ka kooban tahay ay ku saleysan tahay mashaariic dhisme oo gaar ah. Mashruucyo badan oo qaabka warqadda ah ama warqadda ereyga ah waa in la qoro inta lagu guda jiro koorsada. Taas macnaheedu waa walwal badan iyo waqti badan maktabadaha. Dabcan waqti yar ayaa ka haray maadooyinka kale ee koorsada. Waxaan kaa caawin karnaa shaqada sayniska! Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada.
Shuruudahaan adag awgeed iyo howlaha waqtiga qaadanaya ee aad kala kulmeyso inta aad ku guda jirto waxbarashadaada, waxaad inta badan ogaan doontaa in taageerada ghostwriter oo si wanaagsan loogu tababaray cilmiga dhismaha ay kuu tahay nasteexo weyn adiga. Si aad ugu guuleysato cilmiga sayniska waa inaad la hadashaa hay'addeena qorista qoraalka. Qorayaashayagu waxay ku xeel dheer yihiin dhismaha. Haddii aad jeceshahay shaqadaada sayniska - Guri-, Seminaar-, Bachelor-, shahaadada Masterka ama shahaadada - waxay kaa caawin doontaa shaqadaada. Adeegsiga noocan oo kale ah waxay xaqiijineysaa tayada shaqadaada. Sanadihii la soo dhaafay waxaan dhisnay barkad ballaadhan oo qorayaal ah oo xagga dhismaha ah. Marka waad hubsan kartaa inaan kuu heli doonno qof kugu habboon oo xiriir lala yeesho, iyadoo aan loo eegin sida macaamiisha qaaska ah u codsadaan, kaasoo ku garab joogi doona mar walba inta lagu jiro barashadaada iyo dhammaan shaqada.
Qoraalka ghost ee dhismaha guud
Wixii fikradahaaga ah - Bachelor- ama shahaadada Masterka - waanu ku taageersanahay. Laga bilaabo cilmi baaris suugaaneed nadiif ah oo dhameystiran, taas oo ah barta bilowga qoraalkaaga, waxaan kugu taageereynaa khubaradayada. Macno malahan mawduuca takhasuska leh ee lagaa rabo inaad wax ka qabato. Qorayaasheennu waxay kaa caawin doonaan abuuritaanka dhammaan noocyada qoraallada takhasuska leh waxayna horeyba sumcad fiican ugu kasbadeen ardaydeenii hore. Qaar badan oo macaamiisheenna ka mid ah, oo aan sannado badan ilaalinay, waxay si cad ugu sheegeen su'aalahooda inay si sax ah u doonayaan qoraaga isla amarka koowaad. Anaga ahaan, kani waa jawaab celinta ugufiican ee macquul ah ee macaamiisha ku qanacsan ee aan ku heli karno adeeg ghostwriting ah. Waxa ugu fiican ee la sameeyo waa inaad iska dhaadhiciso naftaada Abuur codsigaaga shaqsiyeed ee adigu iskaa ah Guri-, Bachelor-, shahaadada Masterka IWM iyo waxaan kaa dhigi doonnaa dalab aan qasab ahayn oo ku habboon baahiyahaaga! Dabcan, qoraaladeenna ghostwriters sidoo kale waa la heli karaa sida Tifatirayaasha, Akhristeyaal ama shaqsiyeed Tababarayaal in la tuuro!
Qaab dhismeedka qorshaynta magaalooyinka
Markaad dhamaysato shahaadada bachelorka, waad ku kalsoonaan kartaa hanuuninta heerarka xirfadeed ee kala duwan ee qorshaynta iyo dhismaha magaalooyinka oo aad qabato hawlo aad u kala duwan. Qalinjabiyeyaal badan ayaa soo noqda kadib Shahaadada Bachelor-ka inta badan ku noqo kuleejka / jaamacadda oo wali raac shahaadada mastarka oo xigta. Kaliya ka dib markaad si guul leh u dhammaystirto shahaadadan mastarka ah ayaa qalin-jabiyayaashu u furan yihiin dhammaan xulashooyinka xirfadeed. Kadib waxaad dhistay aasaaska loo baahan yahay in loo aqbalo qolalka dhismaha naqshadaha ee gobolada federaalka 2 sano oo shaqo ah kadib.
Dhismaha iyo rajadaada xirfadeed
Xaaladda suuqa shaqada ayaa si dabiici ah sidoo kale u beddeleysa aagga dhismaha iyadoo ku xiran hadba xaaladda dhaqaale. Koorsada dhismaha waxay ku xiran tahay isbeddel joogto ah. Sida bulshooyinku isu beddelaan, ayaa sidoo kale fikradaha la xiriira dhisidda mashaariicda iyo laqabsashada deegaanka. Su'aalaha ku saabsan isticmaalka tamarta, sida dhaqaalaha iyo bey'ada, ayaa raad raaga ku reebay koorsada dhismaha. Waxaad ka heli kartaa mushaharka bilowga ah ee suurtogalka ah ka dib daraasadahaaga boggaga internetka ee Rugta Dhismayaasha (byak.de oder akbw.de) cilmi baaris. Waxaa laga yaabaa in fikrad halkan aad jeceshahay.
Naqshad dhisme ballaaran
Marka lagu daro mashruuca weyn ee xarunta tareenka ee Stuttgart, oo sidoo kale loo yaqaan Stuttgart 21, Elbphilharmonie ama garoonka diyaaradaha ee Berlin, waxaa jira mashaariic kale oo waaweyn oo aan la soo koobi karaynin, taas bedelkeedana lagu guuleystay. Si kastaba ha noqotee, mashaariicdan fashilmay sidoo kale waa shaqooyin naqshad dhismeed oo socon doona sannado badan oo soo socda. Maaddaama aad tahay naqshadeeye, uma aad abuurin kaliya xilligan laakiin sidoo kale mustaqbalka. Waxaan kuu horseedi doonnaa guul!
Hubinta tayada ee dhanka dhismaha